राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आर्थिक चलखेल
संघीय संरचनाअनुसार शासन व्यवस्था लागूसँगै बनेको नयाँ सरकारलाई थलिएको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने चुनौति थियो । यो चुनौतिलाई व्यवस्थित गर्दै अत्यन्त खर्चिलो भनिएको संघीयता टिकाउने आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने जिम्मेवारीलाई बहन गर्न ठूलो पापड बेल्नुपर्ने देखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मूलधारको राजनीति पार्टीका जिम्मेवार नेताभन्दा बाहिरबाट अर्थमन्त्री रोजे ।
राजनीतिक दबाब र अवरोधका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व गभर्नर तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदै अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । त्यस लगतै आर्थिक एवम् राजनीतिक जगतमा फरकफरक टिप्पणी सुरु भयो । आर्थिक क्षेत्रका केही सन्तोष व्यक्त भए पनि राजनीतिकवृत्तमा केही असन्तुष्टि पनि देखिए । राजनीतिक व्यक्तिले ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ भन्ने जस्ता टिप्पणी गरेको पनि सुनियो ।
आर्थिक क्षेत्रमा भने अपेक्षा गरिएको भन्दा केही फरक संकेत देखिन थालेको छ । ठूलो लगानी भएको पूँजी बजारले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई नकारात्मक संकेत गरेको छ । आइतबारको परिसूचक हेर्ने हो भने ४२ अंकले झ¥यो । यसअघिका दिनमा पनि निरन्तर नेप्सेले रातो झण्डा देखाएको थियो ।
शेयर बजार ४२ अंकले घट्दा के गर्दैछ अर्थमन्त्रालय ? भन्ने प्रश्न सोध्ने अवस्था समेत सिर्जना भयो । यसले पूँजी बजारका लगानीकर्ताको मनोवल खस्किएको रुपमा अथ्र्याइएकोे छ । पूँजीबजारसँग सम्बन्धित निकाय रनभुल्ल परेको जस्तो देखायो । अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सामान्य प्रतिक्रिया आए पनि स्पष्ट मुख खोलेका छैनन् । तर, लगानीकर्ताको रोइलो सुन्न थालिएको छ ।
पूँजी बजारमा गडबड आउनु स्वाभाविक भए पनि अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई देखाएर बजारमा चलखेल भएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्रीले शेयरबजार अनुत्पादक क्षेत्र भनी टिप्पणी गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्डबीचमा मनोवैज्ञानिक टसल जस्तो पनि देखिएको छ । जसका कारण बजारमा असर परेको भन्नेहरु पनि छन् । काँग्रेस नेतृत्वले नियुक्त गरेको गभर्नर र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको इशारामा ठूला लगानीकर्ता बहकिएको भन्नेलाई केही तथ्यले बल पनि दिएको छ ।
उदार आर्थिक नीतिसँग सुरु भएको पूँजी बजार धनीहरुको बजार हो । यहाँ दलालमार्फत् पूँजी लगाइन्छ । यो पूँजीको आकार एकताका रु २२ खर्बसम्म पुगेको थियो । तर पछिल्लो समय रु १५ खर्बसम्म छ । यो ठूलो रकम हो । यति ठूलो रकमको कारोबार गर्ने अवस्थासम्म पुगेको यो बजारमा अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड कर्मचारी एवम् बैंकरको बर्चस्व छ । साना लगानीकर्ताको हिस्सा अत्यन्त न्यून छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतबाट संरक्षित लगानीकर्ताले बजारमा एकलौटी गरेका कारण पूँजी बजार त्यसैमा अल्झिने गरेको छ । यस क्षेत्रका जानकारको भनाइमा बामपन्थी र प्रगतिशील सरकार आउँदा जहिले पूँजी बजारले नकारात्मक सन्देश दिने गरेको देखिन्छ । आफ्नो लगानीलाई निस्क्रिय राखेर बजारमा नराम्रो सन्देश दिनका लागि ठूला लगानीकर्ताले बजारमा आतङ्कित गराउने गरिएको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप पछिल्लो पटक पनि बामपन्थी सरकार पूँजी बजार विरोधी हो भन्ने अफवाह फैलाउनका लागि पनि बजारमा गम्भीर चलखेल गरिएको हो ।
बजारको प्रकृति हेर्ने हो भने पनि ठूला लगानीकर्ताको राजनीतिक नियत, दलालको चलखेल, साना लगानीकर्तालाई स्वाहा पार्ने खेल र पूँजीबजार विरोधी सरकार भन्ने गलत सन्देश प्रवाह दिन पूँजी बजारमा काम भएको छ । संघीयतालाई सबल हुन नदिने र वर्तमान सरकारलाई खुला अर्थतन्त्रको विरोधी हो भन्ने गलत प्रचार गर्नका लागि यस्तो भ्रम फैलाइएको बुझिएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा होस् या अहिले खतिवडाको पालमा होस् नियतवस गरिएको अफवाह नै वास्तविकता हो । काँग्रेसको सहकार्यमा बनेको सरकारमा माओवादी र एमालेका अर्थमन्त्री हुँदा शेयर बजारमा ओरालो लाग्न नपर्ने, काँग्रेसले नियुक्त गरेको गभर्नर हुँदा शेयर बजार उकालो लाग्नुपर्ने तर वामपन्थी सरकारको नेतृत्वमा सरकार हुँदा शेयर बजार आरोलो लाग्ने पनि बजारको मनोविज्ञान हुन्छ ।
पूँजी बजारका लगानीकर्ता कस्ता रहेछन् ? काँग्रेस हुँदा हौसिनुपर्ने र एमाले माओवादी आउँदा रुनुपर्ने ? बजार यही हो, देश यही हो । यस्ता तर्क गरेर बजारमा चलखेल गरेर गलत सन्देश दिन खोल्नु अवस्य पनि राम्रो होइन । यथार्थमा नीतिगत समस्या भएको भए एक सातामा यत्रो परिवर्तन आउन नपर्ने हो । त्यस कारण राजनीतिक नियतमा राखेर गरिने व्यापार तथा व्यवसाय दिगो हुँदैन । त्यस्ता व्यवसायीले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई कुनै पनि योगदान गर्न सक्दैन भन्ने सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।